SarcoidosisUK (ယခင်ကသိလ) 1997 ခုနှစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့စဉ်အမြဲကတည်းက sarcoidosis နှင့်အတူလူကူညီပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ sarcoidosis ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတှေ့အကွုံရှိသည်။
အချိန်နှင့်ငွေကိုနှစ်ဦးစလုံး၏ - SarcoidosisUK တစ်ခုတည်းကိုသာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအလှူငွေထဲကနေရန်ပုံငွေတစ်ဦးမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်။ Sarcoidosis ရှားပါးရောဂါဖြစ်ပါသည်နှင့်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသတင်းအချက်အလက်, ထောက်ခံမှုများနှင့်တစ်ဦးရောဂါပျောက်ကင်းရှာဖွေတာသို့နီးပါးမျှသုတေသန၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ကနေကြုံတွေ့နေကြရသည်။ SarcoidosisUK ကြောင်းပြောင်းဖို့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက်နှင့်ထောက်ခံမှုအများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသုတေသနပြုသို့ရန်ပုံငွေ၏ကျယ်ပြန့်အများစုထားရန်ခွင့်ပြုစေတနာ့ဝန်ထမ်းများကပြုမိသည်။
အရည်အသွေးမြင့်မား sarcoidosis သုတေသနသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေများ၏ကျယ်ပြန့်အများစုရင်းနှီးမြှုပ်နှံ SarcoidosisUK ။ ကျနော်တို့အခြေအနေကိုများအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းတွေ့ပြီသည်အထိကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီနှင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီရန်ပုံငွေအစီအစဉ်ကျူးလွန်နေကြသည်။ ထို့နောက်အချိန်အထိကျနော်တို့အကောင်းဆုံးသတင်းအချက်အလက်ပေးသွားမှာပါနှင့် sarcoidosis ကြောင့်ထိခိုက်သူတွေအတွက်တတ်နိုင်သမျှကူညီပံ့ပိုး။
သတင်းအချက်အလက်: တိကျမှုနှင့်အသေးစိတ်ပေး သတင်းအချက်အလက် sarcoidosis နှင့်အတူလူ, သူတို့ရဲ့စောင့်ရှောက်သူများနှင့်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြစ်သည်။
ထောက်ပံ့ကျနော်တို့စိတ်ခံစားမှုများကို ထောက်ပံ့ တယ်လီဖုန်းဖြင့် sarcoidosis နှင့်၎င်းတို့၏စောင့်ရှောက်သူများနှင့်အတူလူတို့အဘို့, အီးမေးလ်, လူမှုမီဒီယာကနေတဆင့်နဲ့ဗြိတိန်အနှံ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံမှုအုပ်စုများမှာ။
တစ်ဦးရောဂါပျောက်ကင်းရှာဖွေခြင်း: SarcoidosisUK ရန်ပုံငွေများပေါ်ပေါက်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသို့သူတို့ကိုငါရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သုတေသန ကြောင်း sarcoidosis များအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းရှာဖွေတာကိုတိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
အသိအမြင်: ကျနော်တို့နားလည်မှုမရှိခြင်းအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် အသိအမြင် ဆေးပညာနှင့် sarcoidosis နှင့် ပတ်သက်. အထွေထွေပြည်သူ့နှစ်ဦးစလုံးထံမှ။ ကျနော်တို့ကဒီကိုပြောင်းမှရည်ရွယ်ပါသည်။
အဆိုပါ Dandelion လိုဂို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုဂိုအတွက် dandelion လူတစ်ဦး (သင်) ကိုကိုယ်စားပြုသည်နှင့်လေတိုက် sarcoidosis ကိုယ်စားပြုတယ်။
အဆိုပါ dandelion sarcoidosis ကလူကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်သောကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ အခြို့သောအဘို့, sarcoidosis လေတိုက်နဂိုအတိုင်းအဆိုပါ dandelion ထွက်ခွာညင်သာစွာမှုတ်။ အခြားသူတွေအဘို့, လေတိုက် ပို. ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်မှုတ်။ ထိုအခါလေတိုက်လုံးဝမှတဆင့်မှုတ်နှင့်ဤလွမျိုးစပါးလူတစ်ဦးဟာကမ္ဘာ့ပေါ်မှာကျန်ရစ်သည့်ကျန်ရှိနေသေးသောအတှေးအများနှင့်တွေ့ကြုံကိုယ်စားပြုသည်။ အကြင်ရှိပါတယ်
ဒါဟာ sarcoidosis လေတိုက်မှုတ်နေသည်ငါတို့သည်ရပ်တန့်ဖို့သုတေသနလုပ်ငန်းရန်ပုံငွေရမယ်လို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးနေပါတယ်။ အတူတူကျွန်တော်အောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။